Ruushka oo Maraykanka uga digay farogelinta uu ku hayo Venezuela • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Ruushka oo Maraykanka uga digay farogelinta uu ku hayo Venezuela
Ruushka oo Maraykanka uga digay farogelinta uu ku hayo Venezuela
January 25, 2019 - By: Khalid Yusuf
Dowlada Ruushka ayaa sheegtay in sharuucda Caalamiga ah ka horimaaneyso taageerada iyo Aqoonsiga Maraykanka u fidiyey Guddoomiyaha Baarlamaanka Venezuela oo sheegtay inuu yahay Madaxweynaha Kumeelgaarka ah Juan Guaidó.
Juan Guaidó, Guddoomiyaha Baarlamaanka Venezuela ayaa taageero deg deg ah ka helay Maraykanka, Midowga Yurub iyo qaar kamid ah dalalka Latinka sida Brazil, Colombia iyo Argentina.
Hase yeeshee in badan oo kamid ah dalalka Caalamka ayaa iyaguna sheegay inay weli Madaxweynaha Sharciga ah u aqoonsan yihiin Nicolas Maduro oo ku guuleystay doorashadii dalkaasi ka dhacday, waxaana kamid ah dalalkaasi; Ruushka, China, Iran, Turkiga, Mexico iyo Cuba.
Madaxweyne Maduro ayaa ku dhawaaqay in dalka Venezuela gebi ahaan xiriirka u jaray dalka Maraykanka, wuxuuna amar ku bixiyey in labo maalmood gudahood dalkiisa uga baxaan diblumaasiyiinta Maraykanka. Maduro ayaa sidoo kale sheegay inuu xiray Safaaradii iyo Qunsuliyadihii ay ku lahaayeen wadanka Maraykanka.
Xoghayaha Arrimaha Dibada Maraykanka Mike Pompeo ayaa sheegay inaysan dhageysan doonin amarka kasoo baxay Maduro oo uu yiri uma aqoonsanin inuu yahay Madaxweynaha rasmiga ah ee dalka Venezuela.
Maduro ayaa sheegay in Maraykanka uu aaminsan yahay inuu gumeysto Venezuela isla markaana cidii uu doonayo uu madax ka dhigi karo, wuxuuna ugu baaqay shacabka iyo Militariga Venezuela inay dalkooda difaacdaan.
Dalka Venezuela oo ah midka la sheego inuu heysto kaydka ugu badan ee shidaalka caalamka ayaa in muddo ah waxa ka jirta sicir barar xargaha goostay, arrimahaasi oo lagu eedeenayo dowlada, ganacsatada iyo waliba cunaqabateynta uu Maraykanka dalkaasi saaray.
Maraykanka oo ciidamo ku xoojinaya Sacuudiga iyo Imaaraatiga
Yemen: Xuuthiyiinta oo joojiyey duqeynta Wadanka Sacuudiga
Maraykanka oo sheegay inuu dhisayo xulafo ka dhan ah IRAN
Afghanistan: Maraykanka oo 29 shacab ah ku dilay Duqeyn